Xiisad ka dhalatay hadalkii Trump ee biya xireenka Nile oo cirka isku sii shareertay | Somsoon
Home WARAR Xiisad ka dhalatay hadalkii Trump ee biya xireenka Nile oo cirka isku...
Xiisad ka dhalatay hadalkii Trump ee biya xireenka Nile oo cirka isku sii shareertay
Dowladda Itoobiya ayaa ka dalbatay Mareykanka inay sharaxaad ka bixiyaan hadal ka soo yeeray madaxwayne Donold Trump.
Qoraal ay soo saartay wasarada arrimaha dibadda Itoobiya ayaa lagu sheegay in wasaaradda ay u yeertay safiirka Mareykanka u fadhiya magaalada Addis Abab.
Mr. Gedu ayaa hoosta ka xariiqay inay marin-habaabin tahay wararka sheegaya in biya-xireenka uu hakinayo qulqulka biyaha wabiga Nile.
Abiy Ahmed si toos ah ugama jawaabin hadalka Trump, balse waxaa muuki shaki ah waxa ku kalifay Mr Trump hadalka uu sheegay.
Abiy ayaa wacad ku maray in Itoobiya ay dhameystiri doonto Biya-xireenka.
“Itoobiya isma dhiibi doonto gardara noocey doonto ha ahaatee,” ayuu yiri.
Article horeMaareeye oo qoraal xasaasi ah ka soo saaray kulan ay Muqdisho ku yeesheen siyaasiyiinta gobollada waqooyi
Article socoda Muqdisho: Waddo lix sano u xirneyd safaarad oo dib loo furay maanta + Sawirro